Hosea 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔwaresɛefo Efraim werɛ fii Yehowa (1-16)
“Owu, ade a wode wowɔ no wɔ he?” (14)
13 “Sɛ Efraim kasa a, ná nnipa ho popo;Ná ɔyɛ otitiriw* wɔ Israel.+ Nanso Baal nti, odii fɔ,+ na owui. 2 Wɔasan ayɛ bɔne bio,Wɔde wɔn dwetɛ ayeyɛ ahoni;*+Wɔtɔ wɔn bo ase yɛ abosom; ne nyinaa yɛ adwumfo nsa ano adwuma. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nnipa a wɔbɔ afɔre no, ma wɔmfew anantwi mma no ano.’+ 3 Enti wɔbɛyɛ sɛ anɔpa mununkum,Te sɛ obosu a ɛyera ntɛm,Te sɛ ntɛtɛwa a mframa bɔ fi awiporowbea,Na wɔbɛyɛ sɛ wusiw a epue fi tokuru mu wɔ ɔdan atifi. 4 Nanso mene Yehowa wo Nyankopɔn fi Egypt asaase so,+Ná wunnim Onyankopɔn foforo biara ka me ho,Na ogyefo biara nni hɔ sɛ me.+ 5 Bere a wowɔ sare so, asaase a ɛso awo so no, na minim wo.+ 6 Wɔn asaase pa* nti, wodidi mee,+Wɔmee, na wɔn koma yɛɛ ahantan. Ɛno nti, wɔn werɛ fii me.+ 7 Afei mɛba wɔn so sɛ gyata a ne ho yɛ den,+Te sɛ ɔsebɔ a ɔtetɛw kwankyɛn. 8 Mɛtow ahyɛ wɔn so te sɛ osisi a ne mma ayera,Na metu wɔn koko mu tokuru.* Na mɛwe wɔn wɔ hɔ te sɛ gyata;Na wuram aboa bɛtetew wɔn mu pasapasa. 9 O Israel, ɛbɛsɛe wo,Efisɛ woasɔre atia me, me a meyɛ wo boafo no. 10 Afei wo hene no wɔ he? Ma onnye wo wɔ wo nkurow nyinaa mu ɛ.+Na wo mpanyimfo* a wokaa wɔn ho asɛm sɛ,‘Ma me ɔhene ne abirɛmpɔn’ no wɔ he?+ 11 M’abufuw mu na memaa mo ɔhene,+Na m’anibere mu na mɛfa no akɔ.+ 12 Wɔakyekyere Efraim amumɔyɛ;Wɔakora ne bɔne so. 13 Ɔbɛte yaw te sɛ ɔbea a ɔrewo. Nanso ɔyɛ ɔba a onnim nyansa;Sɛ bere so sɛ wɔwo no a, ɔremma. 14 Megye wɔn afi Ɔdamoa* nsam;Meyi wɔn afi owu mu.+ Owu, ade a wode wowɔ no wɔ he?+ Ɔdamoa, nea wode sɛe ade no wɔ he?+ Mmɔborɔhunu bɛyera afi m’anim. 15 Sɛ ɔsow aba te sɛ demmire* mpo a,Apuei mframa, Yehowa mframa, bɛba.Efi sare so reba, na ɛbɛma n’abura mu nsu ayow, na n’asuti betwa. Ɔno na ɔbɛfa n’agyapade a ɛsom bo a ɔde asie nyinaa.+ 16 Wobebu Samaria fɔ,+ efisɛ wasɔre atia ne Nyankopɔn.+ Wɔde sekan bekunkum wɔn.+Wɔde wɔn mma bɛhwehwe hɔ apɛtɛw wɔn,Na wɔbɛpaapae wɔn mmea a wɔnyem mu.”
^ Anaa “ɔwɔ tumi.”
^ Anaa “mmoa adidibea frɔmfrɔm.”
^ Nt., “mɛtetew nea edura wɔn koma ho no mu.”
^ Nt., “w’atemmufo.”